HS:- Sawirada isbuucaan ma ka bixin laheyd gurigan 29 Million oo Dolar hadii aad awoodo? Sawiro
Posted by admin on March 02 2012 14:21:13
HS:-Dunidani aynu ku nool nahay waxaa ka jira nolol iskugu jirta mid adag iyo mid dadka u sahleysa iney ku raaxeystaan hantidooda waqti yar ay kunool yahiin dunidani aynu ku nool nahay, halka meelo badan oo dunida ka mid ah sida Soomaaliya dadku ku heysan nolol leysku haleyn karo amab tacliin tayo sare leh mid diin iyo maadi ahba iyadoo ay waxkasta ku xiran yahiin nabadgalyo oo ah sheyga ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka.
Hadaba dalka Mareykan oo ah dal lagutiriyo iney horey uga dhaceen tacdiyo kala duwan oo mudo fog loogu geystay dadka madowga ah ayaa ka mid ah dalalka laga dheehan karo isbedel xaga nolosha ah marka la eego qowmiyada madowka ah amaba dadka asalkooda ka yimid qaarada Africa iyadoo looga soo kaxeeyey waqti hore sidii loo adoonsan lahaa.
Hadaba muuqalka sawirka gurigani aad aragtaan waa mid ka mid ah guryaha ugu quruxda badan ee ay dalka Mareykanka ku leeyahiin dadka ugu caansan xaga sportiga waxana iska leh ciyartooyka caanka ah Michael Jorden oo ah ciyaariyahan looga danbeeyo ciyaarta baaskidka.
Gurigani oo hada iib ah waxaa lagu qiyaasay qiimahiisa 29 Million oo dolar baaxada guriga ayaa ah mid aad u weyn iaydoona albaabka laga galo uu ku qoran yahay 23 oo ah numberkii uu ku ciyaari jiray M J xili ciyaareedkiisii.
Soomaaliya guriga ugu qaalisan waa Viila Soomaaliya iyaduna qiimaheeda ma ahan sidaan iyo si u dhaw kama badna 100 kun oo dolar wey dhici kartaa hadii maamulka argagixisada la shaqeeya ee hada jira meesha laga saaro in qiimahiisu sare u kaco.
La soco nolosha dunida ka jirta